Brezila: Bush miatrika hetsipanoherana. Orogoay miomana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Oktobra 2018 11:20 GMT
Vakio amin'ny teny 简体中文, Français, 繁體中文, English
Raha miohatra amin'ireo polisy miaramila tao Sao Polo, tsara fiomanana ilay vehivavy breziliàna mpiblaogy an-tsary, Tatiana Cardeal, niaraka tamin'ny fitaovany fakàny sary, nandritra ireo hetsipanoherana nanoherana ny fitsidihan'ny filoha amerikàna George Bush. Inty ny maribolana teo amin'ny saripika nalainy :
“Hery avy amin'ny polisy miaramila omaly, nanapaka hevitra ny hanapoaka entona mandatsa-dranomaso tamin'ireo vahoaka efa ho 10.000 tao amin'ilay Diabe Erantany ho an'ny Vehivavy sy fanoherana an'i Bush, niteraka fisavoritahana sy naharatràna olona, satria nisy “fatritrany mpandroba” vitsivitsy sy mpanao hetsipanoherana, tanora tsy nihoatra ny 15, nitandahatra teo anoloana fiara ary nanandrana ny hanakatona ny lalambe sy niteraka korontana”.
Ahitàna lahatsoratra maro momba ny fitsidihan'i Bush ao Amerika Latina. Colin Brayton no manome ny fandikàna tena ilaina an'ireo lahatsoratry ny bilaogera ao an-toerana sy ireo media tsy miankina. Natsangan'i Erwin Cifuentes ny lisitra iray ahitàna ireo rohy ao anatin'ny « Dubya any atsimon'ny sisintany – Manomboka ny fitsidihany ao Brezila ny filoha Amerikàna ». Ataon'ilay profesora mpampianatra ny asa fanaovana gazety ho an-tsoratra ny sasantsasany tamin'ireo fanehoankeviny mahafinaritra toy ny efa mahazatra. Novalian'i Leftside taminà fandalinana iray tsy dia tsara voatra loatra, miaraka aminà saripika iray tsy mampino ahitàna ireo tanàna tsizarizary manoloana ny Hôtel Hilton nandraisana ny filoha Bush. Hadinon'i Made in Brazil nandritra ny fotoana fohy ireo bikinis mba hitantarana ny fisamborana an'ilay lasibika, Janaina Bueno, 25 taona izay, araka ny lazain'ny Brazzil Mag « dia voampanga ho naniratsira sy tsy nahay nitondra tena taorian'ny niahiahian'ny polisy iray azy sy nibaikoany azy hampiseho izay ao anatin'ilay saina mavo sy maitso teny aminy, izany hoe zavatra tsy dia nisy dikany akory ».
Azontsika antoka fa rahampitso i José Murilo Junior dia hitondra ao anatin'ireo famoahany isankerinandro ny fandikàna ny an'ireo bilaogera miteny paortigey ahitàna ireo fijoroana vavolombelona mivantana momba ny hetsipanoherana, ary ireo fandalinana ny fitsidihan'i Bush. Azontsika atao ihany koa ny mahazo antoka hoe an-dalana amin'ny fanaovana ora ambony ampanga ny polisy orogoaiàna .